DEG-DEG+AKHRISO: Cumar Cabdirashiid, Gaas iyo Faroole oo ka horyimid go’aankii Isimmada G. Bari ee PSF – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
DEG-DEG+AKHRISO: Cumar Cabdirashiid, Gaas iyo Faroole oo ka horyimid go’aankii Isimmada G. Bari ee PSF
January 12, 2022 Xuseen 21
Guddoomiyaha Golaha Wakiilllada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil, Madaxweynayaashii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole iyo Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake, ayaa qaadacay go’aanadii xalay kasoo baxay Isimmada dhaqanka gobalka Bari ee ku aadana xalinta khilaafka ka taagan xil ka qaadistii Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni uu ku sameeyay Agaasimihii Hay’adda Ciidanka PSF Puntland Maxamuud Cismaan Diyaano.
Xubnaha afarta ah oo ergada xalinta xiisada PSF iyo dagaaladii magaalada Boosaaso, ayaa sheegay in aysan waxba kala socom waraaqda kasoo baxday isimmada 5 ah, iyagoo ku tilmaamay go’aano wax u dhimaya xasiloonida iyo wadajirka dadka Reer Puntland.
Sidoo kale, Guddoomiye Cabdirashiid Abwaan, Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake, Cabdiraxmaan Faroole iyo Cabdiweli Gaas, ayaa ku baaqay in la ilaaliyo nabadda iyo xasiloonida magaalada Boosaaso, inta mar kale la isaga imaanayo, iyagoo intaas ku daray in nabadgelyada Boosaaso iyo Puntland aan marnaba laga gali karin gorgortan.
Walee waa yaabanahay, dhabanahays!
Aniga oo Ugaaska Sade ah ayaa yaabka kula qabo! Kkk
Waxaan is weeydiinayaa, miiddii uu Harti iyo Majeerteenba lahaa Boosaaso ayaay ku wada suguntahaye, waa maxay Baaqyasan iska soo horjeedo ee aay Boosaaso ka soo kala saarayaa?!
Waxaan gartay aay wax qaldan yihiin markii uu GAas yiri, ninkii reer Puntland Madax u noqdo Dab uu faraha ku hayaa!!
War ma caqligii baa suulay, sideey wax u socdaan?????????
Yahye iyo Moorif says:
@A. A. Xade,
Ugaas Farmaajo u sheega inuu meesha qoryo qoryeynta ka daayo. Isaga ayaa naf iyo maalba u huray inuu meeshaas Puntland mar dumiyo, haddii ay taasi dhacdana waa dhammaadkii jaalle Daarood. Inta goorigoor tahay meeshaas Puntland ah ha dabaqabto. Hana ii qaadan inaan majeerteen ahay ee waxaan ahay jaalle daarood aan Puntland degin.
Soomaalidu waxa ay tiraahdaa, “hal xaaraan ahi nirig xalaal ah ma dhasho.”
Kulligood waa wada siyaasi-xume saaqidiin ah. Hadday Putlayn nidaam hagaagsan ka hirgelin lahaayeen, maanta Boosaaso la iskuma dileen. Isimadu idinka ayay idinka quusteen, ee runta dadka u sheega. Waayo waxaad tihiin bay yaqaannaan; tuugo uruurtay.
Gunaanadkii, halka ay isimadu dhigeen way haleeleen. Si fiican bay a uga baaraandegeen go’aankooda. Waxa ay muujiyeen dareenka mandaqadooda & in arrinku ka weyn yahay niman la dhexdhexaadinayo. Sidaa daraadeed, halla niqaasho isimada inta macawisihii gaagaabnaa isu soo gashataan. Maamul & dawladnimo xaggaa iska dhiga.
FAROOLE IYO GAAS DEG DEGA JOOJIYA, TALADA JUXA HALA QAATO.
CUMAR WAA MISKIIN, CABDIRASHID GO. AAN
DEG DEG HA QAADAN. TALADII juxa
deg deg majiro hada nahay reer puntland deni aan malin cad dooranay 5sano markii ay u dhamato waan la xisabtamin laakiin buuryaqab burhaan cid dooratya maleh waxuna u dhaqmaa sidii jiridii waxay tahayba maanta waxa xasuusanay alaha u naxariste cabdulahi yusuf hadii uu noolan lahaa dhaqan bi is isimo isku sheegaa go,aano mooryaameed masoo saareen.
BURHAAN boqor daarood iska dhaafee xataa horjooge maleeshiyo beeleed uma dhaqmin waxuu u dhaqmay sida buuryaqabkii inta laga gudayana ma deenayo niicda iyo soo sarista go,aano lidi ku ah wada jirka iyo nabada puntland ,madexweyne DEni adiga ayaa ka masuula puntland ilahay ka sakaw ilma diyaano iyo burhankan buryaqabka ah cagta mari waxbana ha xeerin hadii ay 200ku dhimato boosaso waxa kamuhiimsan ilaalinta iyo wada jirka puntland, talaydu waa dhismaha ay ku jiraan ilam diyaano ku fasax taangiyada iyo bm ,walee 2sac inaysan qaadaneyn
Aad iyo aad Guul Puntland. Hawl dhameystir u baahan weeye..
Idinku waxaad awood u leedihiin in aad ka daba hadashaan isimada qaaliga ah oo wax walba aad siyaasadeynayssan. Haddaad tagteen Boosaaso maxaad soo siyadiseen, Ma waxaad u taagan tihiin in diidmo ka horkeentaan go’aanka isimada sharafta leh. Maxaa hadda xal aad heysaan oo aad ku soo kordhin kartaan xaalada hadda taagan ee puntland ka jirta, Hadda waxaa ii muuqata in aadan wax dan ah aydan ka wadin puntland oo caqligiina ku soo arurey in go’aankii la gaaraba in aad ka hortimaadaan ,idinkana aydan wax soo kordhinaynin.Haddii siyaasiyiin Dalka u dhashay ay sidaan noqdeen Alahayow dalkeena inoo badbaadi.
Walaahay waa yaab!
Maantoo kale puntland waxay u baahantahay wiil c/laahi oo kalaa. Dadka reer puntland waa dad u bisil dawladnimada ogolna in la maamulo. Waxay u baahanyihiin, hogaamiye mooryaanta danaha gaarkaa wadata ka qabta. Hoogaan geesi ah oo go aanka dantu kajidho aan ka laaban haday 1000 wiil ku dhimanayso.
Deni waa u dhigmaa AUN Cabdullahi Yuusuf.
Noociisana somali kama dhalan waayo waa ninkii somali u horeeyey oo ina adeerkiis iyo reer tolkiis ka hor istaagay in ay boobaan hanti qaran. Waa nin caadil ah oo ilaahis ka baqaya. Ninka geesiga ah ma galo cadaab waayo kama baqo in uu dulmi la dagaalo loowlaa xaatay ay u badantahay in uu halgankaas ku halaagmo.
Guul baan u rajeyn Deni, Allah go,aan sax ha waafajiyo, macal asaf isimadu hab dawladeed wax uma qorin.
History repeats itself first as tragedy then as farce!
Dani inuu C/Laahi u dhigmo iyo inkale waxaa ku ogaan donaa siduu u maareeyo mashaqada taagaan!
C/Laahi kamuu soo harin ilaa ay magan Isaaq noqdeen. Maalintuu boosaaso galayay waa xasuustaa kuwii maalintii uu baxayay kadaba yuusayay baa laamo qoyan uruxayay.
20 san kadib taariikhda dib iso qoreysa, waana ogaan doonaa Dani meeshuu kagalo.
Burhaan iyo qaswadaaalka la jiraa ma xurmeyn madaxda,isimada meesha u jooga xalka,waana dhabar fureen in si wanaagsan lagusoo dhameeyo arrinta markay go’aamo kasii daran kuwii hore soo qorteen
Bayaan loo dhan yahay halkii laga sugayay oo lagusoo afjaro xiisaddii jirtay!!!!
Meeshan amarro iyo gacmo ka baxsan Puntland ayaa hagaya.
Deni iyo xukuumadda lala arag qaska cidda wadda.
It’s the end of the line of hereditary rulers of Puntland Mohamud Saleban. Bye bye.
Warqadan been abuurka ah ini cabdirashiid wuxuu yiri waxba kama igu
Cidi kuma saxiixna, faroole iyo wiilkiisaa soo xarxariiqday. Gaanka isimada waa in la raacaa. Hadii Deni iyo aaranshaydaan diidaan waxan filayaa in xuduudu noqondoonto kantoroolkii Garowe. Wax badan ayaa tolnimo la xeeriyey laakiin ciise garanwaa.
Dhamaan Niman u shaqo yimid puntland. Warkooda ma qaadaneyno.afka English ka waxaan lagu yiraahda dadka iyagoo kale ah “spent shell” macnaheedu yahay qashirka. Nimankaan xitaa wadamadiida ay passport ka haystaan ayaa parkingka geliyeen oo u arkay in ay wax dambe bulshada ku soo kordhinayn. Mafia style,self serving crooks time is over. We need to get our puntland back.waxaan ka cabsanaynaa dhimankaan in dhaxaltooyo ka dhigaan dowladnimada puntland. Waxay beerta u diyaarinayaan ilma hooda siday usii boobi lahaayeen hantida puntland.allow naga qabo sharkooda. These have expired brains of no use anymore.
Hadii Deni uu ku guuleysto toosinta sharciga iyo ilaalinta hantida qaran iyo hadii uu ku guuldareystaba waxuu taarikhda ka galin baal sharafleh. Waayo waa caqiidada iyo qodobka uu ku taagan yahay waxa qadirintaas u soo hoyin.
U istaagida xaqu ma leeh guuldaro. Sayidkiiba kuma uusan guuleysan in uu gaalo wadanka ka kiciyo laakiin ficilkiisii ahaa gaalo diidka ayaa ka dhigay halyeey ay qadariyaan jiilal badan oo ka dameeyey.
Deni haduusan waxba ka qaban Karin waxa socda yuusan uga darin oo asaga la eedin.
Gacmo siyaasi,dhaqaale xooggan ayaa lagu kiraystay isimada Bari & PSF.
Inuu iska dhiibo taladeeda,kana gacan taagto iyo inu xalkeeda Bosaso u tago,soona baryo xalka arrinta waxba kama dhexeeyaan.
Waa qasab labadaas arrin oo waa mare hadduu iska fiirsado waa Puntland kala dhantaalan,gobolkaasna gacanta dawlada waa ka baxayaa.
Waa marka kalee asaguun baa ah hogaankii la doortay,loogana fadhiyaa xal ka keenida arrinta Bari.
Ossman Mohamoud Hassan says:
Waxaa wax lala yaabo ah, in odoyaal dhaqan sheeganaya arrin dawladeed soo dhex galaan oo siyaasad iyo maamul dhexgalaan oo nin ciidan ah oo Taliye Sare ah oo madaxweyne iyo maamul bedeleen dhahaan lama bedeli karo. Cajjiib taasi miyaanay ahayn Puntland dawlad kama jirto ama amarka Madaxweyne ma shaqaynayo, kala dambayntii meeday, Odayga Boqorka Daarood weligiin ma aragteen isaga oo maalin khudbad boqornimo meel ka jeediyey oo hal kalmad oo meel gasha laga maqlay, weligiin ma aragteen arrin uu galay oo si fiican u dhammaaday, nin xanuusan oo kuwa dawooyinka cuna buu iila egyahay, biligii boqornimo iyo garashadii ma leeyahay, waa kii Puntland loo soo marayey, Aw u duceeya iyo Allah bay Puntland leedahay.
walaahi somali dad waalaan weeye maryaha iskasita dowlad ma wadikarto maxaa xamar,bosaso kismayo baydhabo ka taagan kala celiyooy intaas oo dowladood ayaa ku kala dhexjra intaas xoolo la siinaya ninkasta min askari barlamaan ilaa wazir mushar ayaa dowladahaasu siiyaan waxaa loosiin shartooda Ilaahay dadka qabto qaxooti ayaan caalamkii bareen wiligiin ma argteen dumar saxarda libiya lugeenaay iyo ku sucuudiga iyo yemen boqol baa libiya laga keenay xalay miyir maleh soomali